» एमाले आजको संसद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?
एमाले आजको संसद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?
३२ साउनमा हतारहतार संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले १ भदौमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत संख्याले दल फुटाउन सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी आध्यादेश ल्याएको थियो ।
एमालेले त्यही दिन माधवकुमार नेपालसहित नयाँ दल गठनको पक्षमा रहेका १४ जनालाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न पत्र पठायो । तर सभामुखले त्यसबारे कुनै निर्णय लिएनन् ।
दल विभाजनमा सहभागी नबन्न एमालेद्वारा जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन (अपानीसहित)
एमाले विभाजन गर्न मध्यराति संसद अधिवेशन अन्त्य गरियो : अध्यक्ष ओली